Ra’isulwasaaraha Soomaalya oo gudiimiyay shirka dhaqaalaha xukuumada. – The Voice of Northeastern Kenya
Ra’isulwasaaraha Soomaalya oo gudiimiyay shirka dhaqaalaha xukuumada.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shalay guddoomiyay shirka Hormarinta dhaqaalaha Soomaaliy oo looga hadlayay horumarka Maaliyadeed iyo hiigsiga hanaanka deyn cafinta dalka Soomaaliya.
Shirkan oo lagu qabtay Xafiiska R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa si gaara diiradda loogu saaray horumarada Maaliyadeed ee Soomaaliya ay ku talaabsatay, waxaana ka qeyb galay qaar ka mid ah Wasiirada ay quseeyaan arimaha dhaqaalaha gaar ahaan wasiirada Maaliyadda ,Qorsheynta , Beeraha iyo Xubno kale oo kamid ahaa Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda dowlada Saoomaaliya DR Abdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa R/Wasaaraha iyo Wasiiradii ka qeybgalay madasha u gudbiyay warbixin ku sabsan horumarka Maaliyadeed iyo hiigsiga hanaanka deyn cafinta Soomaaliya oo hadda meel wanaagsan maraya, wuxuuna sheegay inay wanaagsan tahay rajada laga qabo in Soomaaliya laga cafiyo balaayiinta deymaha ah ee lagu leeyahay.
wasiir Beyle ayaa sidoo kale faahfaahin ka siiyay shirka qorshayaasha Wasaaradda Maaliyadda ee kobaca Dakhliga iyo diyaarinta Miisaaniyadda Cusub ee 2019 – 2020.
Wasiirka maaliyada Soomaaliya ayaa sheegay in Shirka dhaqaalaha Xukumadda Soomaaliya ee todobaadlaha ah ay sii dheeryihiin shirar kale oo joogto ah kuwasoo ka dhaca gudaha Wasaaaradda Maaliyadda Soomaliya oo lagu hormarinayo Dhaqaalaha iyo in la gaaro Hadafka Soomaaliya ee ah in isku filnaasho Dhaqaale uu dalku ku tilaabsado mudo aan fogayn.
← AMISOM oo miino kula qaraxday gobolka Hiiraan.
Xoghayaha kalkaaliyaasha dalka oo xalay xabsiga ku baryay →